Shirkada Samsung oo dalbatay inaan lasii iibin lana adeegsan Galaxy Note 7 (Sawiro) | Gaaloos.com
Home » Layaab » Shirkada Samsung oo dalbatay inaan lasii iibin lana adeegsan Galaxy Note 7 (Sawiro)
Shirkada Samsung oo dalbatay inaan lasii iibin lana adeegsan Galaxy Note 7 (Sawiro)
Shirkada Samsung oo soo saarto noocyada kala duwan ee mobaylada ayaa ka dalbatay dadkii horey u iibsatay mobilka Galaxy Note 7 iney damiyaan, ilaa ay ka baareyso warbixin cusub oo la xiriirta iney qabsanayaan dabka marka jaajarka ay qaadanayaan.
Shirkada laga leeyahay dalka koofurta Kuuriya ayaa sidoo kale ka dalbaday dadka dib usii iibiya taleefanadooda iney joojiyaan sii iibinta moobeyladaasi.
Bishii September shirkada ayaa dalbatay in lagu soo celiyo 2.5 Milyan oo taleefano ah kadib markii ay soo baxday cabasho la xiriirta in batariga uu waxyeelo geysanayo, waxaana kadib macaamiisha shirkada lagu wargeliyay in wax laga badalay dhibaatadii jirtay.
Laakiin waxaa hadda jira warbixino cusub oo ku aadan in moobeyladii la badalay qaarkood dabka ay qabsanayaan._91747845_samsungbatteryfire
Ruux adeegsanayay moobeylkaasi ayaa soo toosay mobeylkiisa oo qiiq badan ka baxay isla markaana gubtay, sida sawirada ka muuqata.
“Maxaa yeelay macaamiisheena badbaadooda ayaa muhiimada koowaad noo ah, Shirkada Samsung waxay weydiisaneynaa dhamaan dadka qaatay taleefanada Note 7 iyo dadka dib usii iibiya iney joojiyaan sii iibinta iyo isdhaafsiga Note 7 ilaa aan ka baareyno cabashada cusub ee timid”ayaa lagu yiri war kasoo baxay shirkada.
“Macaamiisha heysta mobeylkii hore iyo kuwa heysta Note 7 midkii lagu badalay waxaan ka dalbaneynaa iney damiyaan oo ay joojiyaan isticmaalka mobeylka ilaa aan wax ka badaleyno”ayaa lasii raaciyay warka kasoo baxay Samsung.
Title: Shirkada Samsung oo dalbatay inaan lasii iibin lana adeegsan Galaxy Note 7 (Sawiro)